Gabadh Soomaali Ah Oo Ku Dhimatay Webi Ku Yaalla Dalka Ingiriiska – somalilandtoday.com
Gabadh Soomaali Ah Oo Ku Dhimatay Webi Ku Yaalla Dalka Ingiriiska
(SLT- Manchester)-Gabadh lagu magacaabi jirey Shukri Yaxye Cabdi oo 12 jir ah ayaa waxa ay habeenkii Khamiista ee la soo dhaafay ku hafatay Webiga Inwelli oo ku yaalla magaalada Bury ee Greater Manchester ee gobalka England ee dalka Britain.
Saraakiisha Booliska Manchester weyn ayaa loo yeedhay markii ay gabadha ku hafatay Webiga, iyadoo Kooxaha Quusayaasha soo heleen maydkeeda.
Gabadhaasi oo ardayad ahayd ayaa la rumeysan yahay inay iyada iyo hooyadeeda dalka Britain tageen bil ka hor, sida ay qaar ka mid ah Qaraabadeeda u sheegeen Wargeyska The Manchester Evening News.
Marxuumadda adeerkeeda oo lagu magacaabo Mustafa Omar waxa uu u sheegay Wargeyska The Manchester Evening News in ayna gabadha aqoonin qaabka loo dabaasho, wuxuuna xusay inay Hooyadeeda ka argagaxday geerida gabadheeda yar.
Waxa uu intaasi ku daray inay ahayd gabadh fiican oo qaxooti ahaan u timid dalka Britain, isla markaana ay ku cusbayd Jaalliyadda Soomaalida ee ku nool Britain.
Dhinaca kale, Maama Zamzam Tuure oo iyadoo la ilmeynaysa la hadashay isla Wargeyskaasi waxay sheegtay inay gabadheeda ahayd qof cajiib ah, deggan oo rajo wacan lahayd, isla markaana ay wada tebi doonaan iyada iyo Walaalaheeda
Geerida Shukri Yaxye Cabdi, waxa uu ku soo beegmay saacado kadib, markii 2 nin oo da’dooda kala ahayd 25-jir iyo 26-jir maydkooda laga soo saaray Xeebta magaalada Devon oo ah magaalada 4-aad ee ugu weyn Gobalka England ee dalka Britain.
Xilligan oo ay dalka Britain iyo dalal kale ee Europe ka jirto Kulayl daran ayaa waxay dadka inta badan ku dabaashaan Webiyadda, Harrooyinka iyo Badda, iyagoo qabow ka raadsanaya, iyadoo heer-kulku Britain gaadhay ugu yaraan 30 digirii oo Sentigareedh ama 80 digirii oo Ferenhayt ah.